Imandarmedia.com.np: यो समाजले मलाई यसरी 'बेश्या' बनायो...(एक युवतीको रियल कथा)
Literature » यो समाजले मलाई यसरी 'बेश्या' बनायो...(एक युवतीको रियल कथा)
यो समाजले मलाई यसरी 'बेश्या' बनायो...(एक युवतीको रियल कथा)
कहिं देखे देखे जस्तो लाग्ने अनुहार र सुनेकै आवाज हो भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि ठम्याउन गाह्रो पर्दै थियो । आफ्नो नामै लिएर बोलाउने मान्छेलाई ‘को तपाई’ ? भनेर सोध्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दै थियो ।
‘म सपना । चिनीनौ के हो ?’ उसले हाँस्दै भनि ।
ए फेरी हाँस्दै बोली -‘नराम्री भएको छु अरु सबै उस्तै हो ।’त्यहि हाँसो हो उसको तर खै आज मलाई उसको अनुहारमा पटक्कै नसुहाए झैं लाग्यो । ‘कहाँ बस्छौ सपना ?’‘यहिं नजीकै एउटा नामको मात्र कोठा छ, तिमीलाई फुर्सद छ भने चिया बनाएर खुवाउँछु’ । ‘हुन्छ हिँड’ । मलाई उसको कोठामा जान मन लाग्यो ।
‘तिमी अझैं पनि उस्तै रहेछौ है उषा’ ? उ फेरी हाँसी । उस्तै भन्नाले ? अरुकै कुरा मात्र सुन्ने, आफु नबोल्ने ।
उसका गडेका आँखा हेर्दै मुस्कुराएं म । उसले प्रशंसा गरि -तिम्रो हाँसो खुब राम्रो छ ।
बागबजारको गल्ली भित्रको पुरानो घरमा छिर्दै बोली सपना, ‘मेरो जिन्दगी र यो घर उस्तै छ सबैतिर अँध्यारो’ । भुईंतलामा रहेको कोठाको ढोका खोल्दै फेरी थपी उसले -धन्न लाईन भएको बेलामा परेउ तिमी, उसले कोठाको बत्ती बाली ।एउटा सानो खाट, भुईंमै राखिएको ग्याँस चुलो, कोठाको आधा भाग मात्र ढाकेको प्लास्टीक कार्पेट, जुन ठाउँ ठाउँमा च्यात्तीएको थियो । अस्तब्यस्त लुगाहरु छेउको सानो टेवलमाथी थुपारिएको, सपनाको कोठा, सपनाको अनुहार जस्तै बिरक्त लाग्दो थियो ।
म खाटमा बसें, सपना चिया बनाउँदै सोधि,’पढ्दै छौ होला है तिमी ‘? अँ । मैले छोटो उत्तर दिएँ ।
‘के गर्नु मैले पनि पढेको भए केहि हुन्थ्यो की’ । सपनाले यस अघि कहिल्यैं पढाईको कुरा गर्दैनथी, जसरी पनि पैसा कमाउने हो, पढेर समय के खेर फ्याक्नु भन्ने सपना आज नपढेको प्रसंग जिन्दगी संग जोड्दैछे ।
उसले चियाको कप मलाई दिंदै भनि –बोलन के भएको तिमी संधै उस्तै लाटी’ । बर्ष पहिले राखिएको मेरो लाटी नाम आज फेरी उसले सम्बोधन गर्दा नजानिदो खुशी लाग्यो मलाई । यो लाटी सम्बोधनले कसैको याद आयो, झट्ट सोधें, -अनिल खै त ? ‘तिमी त्यसको कुरै नगर, सब त्यसकै कारणले यस्तो भयो । सालेले मेरो जिन्दगी बबार्त बनायो’ । उ रिसाएझै गरी । उ बिदेशबाट आएको छैन ?
‘खै कता मर्यो, तिमीलाई मेरो जिन्दगीको रामकहानी थाहै छैन उषा । देखेनौ मेरो अवस्था, मेरो हालत, यो कोठाको गती ? उसको आँखाभरि आँशु भयो । म के भनौं भनौं को स्थीतीमा अल्मलीएं फेरी, उसले जीन्दगीको आधा आधी बिरत्तता कोठामा छिर्नु अघिनै सुनाईसकेकी थिई, अस्पस्ट भाषामा ।
सपना मलाई हेर्दै भन्दै थिई यी कुरा । दुखका नमिठा कुरा उसले यति मिठा शब्द प्रयोग गरेर बोली । सधैं हाँस्नु पर्ने, ठट्टा गर्नुपर्ने, राम्री हुनुपर्ने, जीस्कीरहनु पर्ने सपना आज अर्कै भईछ । तिम्रो र मेरो अन्तीम पटक भेट हुँदा म डान्सबारमा काम गर्थें है ? उसले सोधी । अँ, अहिले पनि काम गर्दैछौ त्यहाँ ?
केही कुरा गर्न खोज्योकी उ निउँ खोज्न थाल्थ्यो- हेपेको तिमीले मलाई कमाउन सकेन भनेर ? यसरी नै ३ महिना बित्यो, मैले सर सापट गरेर कोठा चलाएं । एक दिन अनिलले भन्यो सपना म अर्को कन्ट्री एप्लाई गर्छु पैसा खोज ।
तिमी त दुनियाँ लाई चिन्छौ नि । मागन सबै संग अलि अलि , म तिर्दीन्छु यार । उ फेरी झोक्कीयो । के गर्नु उ नेपाल बसे यहि हो ताल । यहि सोचेर मैले चिनेजति सबै संग पैसा मागें ब्याज तिर्ने सर्तमा । १ लाख २५ हजार जम्मा भयो । उ मलेशिया जाने भयो फेरी । धेरै कुर्नु परेन एप्लाई गरेको २ महिनामानै भिसा लाग्यो । मलेशिया पुगेर फोन गर्यो म पुगें भनेर ।
‘हेर बढि नाटक नगर कत्तीन माया गर्ने जस्तो’ भन्यो फेरी । के भएको छ अनिल तिमीलाई ? यहाँ म प्रेग्नेन्ट छु, ४ महिना हुन लाग्यो । तिमीलाई सुनाउन कति रहर थियो । मैले रुंदै भनें । के रे ? हावा कुरा नगर है सपना । के हावा कुरा बच्चा हुँदैछ हाम्रो ।
ओई तँ मलाई फँसाउन आएको रैछेस् होईन ? म नहुँदा डान्सबारमा काम गरिस, कती जना संग मस्ती मारिस । अब मलाई भिराउन खोजेको त्यो बच्चा रु हेर् मैले यहि भन्न फोन गरेको थिएं । म तँलाई माया सायाँ के गर्दिन,तँ जस्तो केटी मेरो जीवनमा बति आए कति गए, उसले हाँस्दै भन्यो । मलाई यी सबै कुरा पत्याउन गाह्रो भईरहेथ्यो । अनिल रक्सी खाएको छौ के हो रु मैले नरम हुँदै भने । के रक्सी खानु, मैले यहि भन्न फोन गरेको थिएं ल राख्दीएं भन्दै फोन काट्यो । म न त रुन सकें न हाँस्न । धर्ति नै भासिएझैं भयो । फोन डाएल गरें अनिललाई १३ पटक फोन काट्यो र एउटा म्यासेज पठायो । सपना प्लीज जे भयो बिर्सिदेउ,मेरो अर्कै गलफ्रेन्ड छ, म उसलाई छोड्न सक्दीन । मलाई फोन नगर ।
मैले राति सम्म फोन गरिरहें । उसले फोन उढायो बल्लबल्ल र भन्यो तँ लाई राम्रो मुखले भन्दा हुँदैन की के हो । यतिका समय मैले वास्ता नगरे पछि आँफै बुझ्नु पर्ने हो । आफ्नो सुर गर तँ । त्यसछि उसको मोवाईल अफ भयो ।कोठा भाडा नतिरेको २ महिना भएको थियो । सामान ल्यायाउने पसलको उधारो नतिर्दा बाटो हिड्न मुस्कील भएको थियो । उसलाई दुबई पठाउँदाको ऋण भाउजुले माग्न थाल्नु भएको थियो । मलेशिया पठाउँदा पैसा दिने हरु अबत पैसा पठाउन थाल्यो होलानी बुढाले भनेर सोध्न थालिसकेका थिए । अनिलले आज के सोचेर मलाई आफ्नो सुर गर् भन्यो । त्यो रात रोएरै कटाएं ।
मैले ग्राहक खोज्न थालें । बिस्तारै मेरो कोठामा घर बनाउने ज्यामी केटाहरु र ठेकेदार सम्म आउन थाले । ड्राईभर र खलासीको फोन आउन थाल्यो । २०० देखि ५०० सम्म दिन्थे तिनीहरु । कसैले रातभरि सुतेर पनि पैसा दिंदैनथ्ये ।साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो पेट दुखेर,तै पनि आएका मान्छे टाढिन्छन् भनेर उनिसंग कैलेहि गुनासो गरिन । ति मध्य एकजना ड्राईभर मेरो अलिक नजिक भयो । १०००– २००० रुपैयां छोडिदिन्थ्यो । भोजपुर तिरको गुरुङ थियो उ ४० बर्ष जतिको ३ वटा छोराछोरीको बाउ ।
नराम्ररी कुटाई खाएको थिएं के असर परेछ तल्लो पेट दुखेर रगतको धरा बग्न थाल्या । त्यो दिन बाट ३ दिन सम्म म कोठाबाट बाहिर निस्कीहिन । ३ दिन सम्म गुरुङ पनि आएन । चौंथो दिन छोरी बोकेर कोठा खोज्न हिँडे, बल्ल बल्ल यो कोठा पाएं । सबै सामान पोको पारेर यता आएं । त्यो मोबाईलको सिम पनि फ्याँकीदिएं । एउटा घरमा कपडा धुने काम पाएं, खुब सुख मिल्यो त्यो काम पाउँदा ।
कसरी गर्नु, तिमीले मलाई जुन कोटेश्वरको कोठमा भेटेको थिएउ, म त्यो कोठाबाट भागेर हिँडे । सामान त पहिले नै उठाई सकेका थिए अनिललाई पठाउँदाको ऋण तिर्न नसक्दा । बाँकी पैसाको लागि फोन गर्ने र ढोका हान्न आउनेको भिड लाग्थ्यो । एक दिन लगाउने लुगा एउटा झोलामा हालेर त्यो ठाउनै छोडेर हिँडे । ऋण दिनेहरुको फोन आउछ भनेर त्यो सिम नै भाँचेर फ्याकीदिएं । तिम्रो नम्वर त्यही सीममा थियो । त्सपछि सुकेधारामा कोठा खोजें । नानी त्यहीँ जन्मेकी हो । दुखको बेलामा के होस हुनु यार उसले भरिएका आँखा बाँया हत्केलाले पुछि । उसले फेरी थपि उषाम तिमीलाई संधै लाटी भन्थें, हेर म बाठी भएर जीन्दगीलाई नरक बनाएं ।
मैले के भनेर उसलाई सम्झाउने शब्द नै पाईन । सपना तिम्रो मोवाईल नं। कति हो रु उसले र मैले एक अर्काको नं। राखेउँ । म कतै तिमीलाई हुने काम भेटें भने भन्छु सपना, नआत्तीअ, यति धेरै दुख भोगेउ, अबत छोरी पनि हुर्कीई । मैले हाँस्ने कोषिश गरें मन निचोरीए पनि । मैले ४ घण्टा त्यहिं बिताएं, डिल्ली बजार भोली जानु पर्ला । निस्कने बेलामा हाँस्दै भनें, सिम चेन्ज नगर है अब, म फेरी भेट्न आउँछु । छोरीलाई देख्न मन लागेको छ ।
उसले जीस्कदै भनि – लाटी मलाई यो उसको खुषी मिसिएको हाँसो र लाटी सम्बोधन साह्रै साह्रै राम्रो लाग्यो ।
म निस्कीएं सपनाको कोठाबाट, बाटोभरि हिजो र आजकी सपना याद आईरही मलाई । पहिलो पटक सपनाकै हातले शहरिया रुप दिएको थियो मलाई । गोरखाको पालुम्टारबाट काठमाडौ पढ्न आएको म साँच्चै लाटी केटी थिएं । लामो कपाल, नमिलेका आँखी भौं,साधारण कुर्ता सलवार लगाउने म एकजना साथीको करले कोठा नजिकैको ब्यूटीपार्लर पुगेथें । उसैले थ्रेडीङ गरिदिएकी थिई पहिलो पटक मेरा आँखी भौं । लामो कपाल काट्दै उसले भनेकी थिई, स्टेप कट सुहाँउछ तिमीलाई । बाटोमा भेट हुँदा म उसलाई दिदी भन्थें,सधैं जसोको भेटले म उसको साथी भएं, मैले उसलाई सपना भन्न थालें ।
बुढी मान्छेको जस्तो लामो लामो कुर्ता के लगाएको ? राम्रो डिजाईनको कुर्ता सिलाउ, तिम्लाई त पेन्ट सुहाँउछ । यसरी उसले मलाई यहाँको वातावरण संग घुलमील हुन सक्ने बनाई । त्यतिबेला मेरो कलेज बिहानमा थियो । कलेजबाट फर्केपछि खाना खाएर म सपनाको पार्लरतिर दौडहाल्थें । दिनभरी सपनाकै पार्लरमा हुन्थें म । घरि त्यो केटाले जीस्कायो, घरि यो केटाले यसो भन्यो, यस्तै यस्तै कुरा सुनाउँथी सपना हाँस्दै ।
ए मलाई जीस्काउँदै भन्थी, कलेज पढ्न रमाईलो हुन्छ होला हैरु कलेजमा केटाहरु हुन्छन् नि । जति केटाको कुरा गरेपनि उ उत्ताउलो स्वभावकी थिहिन, काम गर्थी, सबै संग राम्रो ब्यबहार गर्ने भएर उसको पार्लर राम्रो संग चलेको थियो । गेरो बर्ण,ठुला ठुला आँखा, मिलाएर लगाएको गाजल, ह्यरकलर गरेको खैरो कपाल,छोडे पनि बाटे पनि सपनालाई उत्तीकै सुहाँउथ्यो । मिलेको शरिरमा जे लगाएपनि उस्तै राम्रो देखिन्थ्यो । म साह्रै प्रभावित थिएं, उसका सुन्दर गुलावी ओठबाट निस्कने हाँसो लोभलाग्दो थियो ।
साह्रै माया गर्थि सपना मलाई, त्यति बेला म संग नोकीयाको सबैभन्दा सस्तो फोन सेट थियो । म बिहान उठ्न अल्छी छु भन्ने थाहा पाएपछि उ मलाई बिहान ५ बजे फोन गर्थी, मेरो कलेज छुट्छ भनेर उठाईदिन्थी । यसरी सपना अचानक आएर मेरो मनबाट हट्नै नसक्ने गरि राज गरेर बसी । दिन बित्दै थिए, मेरो आई।ए। पहिलो बर्षको परिक्षा सुरु भयो । परिक्षा कस्तो भयो रु सपना नै सोद्थी हरेक दिन । मेरो परिक्षा राम्रो भएकोमा उ खुशी हुन्थी ।
हाई म अनिल, उसले हात बढायो, मैले साह्रै अप्ठेरो मान्दै भनें, म उषा । बसको अन्तीम सिटमा हामी ३ जना संगै बसेउ । सपना र अनिलको जोडी मात्र होईन, स्वभाव पनि उस्तै रहेछ, दुबैलाई गफिन र हासींरहन पर्ने । म नबोलेको देखेर अनिलले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, -तिम्रो साथि लाटि हो कि बोर मानेको हो ?
नजिस्काउ है बिचरा उ तिमि जस्तो हावा छैन् । यस्तै यस्तै कुरा गर्दै हामी नगरकोट पुग्यौं । म बाटोभरी प्रायः चुपचाम नै रहें । अनिलले लाटी भनेर जिस्काई रहयो । दिनभर घुमेर फर्कियौं हामी । सुत्ने बेलामा अनिलले हास्दै भन्यो, -दिनभर हाम्रै गफ मात्र सुन्न आए जस्तो भयो उसलाई । साँझतिर गोगंबुको गणेशथान आएर हामी छुट्यौं, जाने बेलामा अनिलले भन्यो बाई सपना, मलाई हेर्दै जिस्कायो, बाई मिस लाटी ।
सपनाको ठाउँमा अरु भएको भए, छोरीलाई मारेर आफु पनि आत्महत्या गर्दा हुन् या त छोरीलाई बाटोमै छोडेर आफनो सुर गर्दा हुन् । यति धेरै दुःख पाउँदा पनि सपनाले न आत्महत्या गरी न छोरी छोडि । शिक्षित जमातले भन्छन्, त्यो केटालाई कारबाही गर्नु पथ्र्यो । डिएनए चेक गराएरै भएपनि उसैको छोरी हो भनेर प्रमाणित गर्नु पथ्र्यो ।भन्नु र भोग्नु अर्कै कुरा हो । एक छाक टार्न सपनाले कति कति क्षण आँशु बगाई, के के गरी त्यसको हिसाव किताव उसले खोज्न थालि भने कसले सहयोग गर्छ उसलाई ?